islaamka iyo seyniska – Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga diiniga ah Bartaan
Category: islaamka iyo seyniska
Mucjisada quranka Koonku wuu fidaa [Expanding Universe]
Magaca Allah ayaan ku bilaabaynaa, mahaduna waxay usuganatahy Allah (S.W.T) waxaan kaloo ku sallinaynaa Nabigeena Muxamed (N.N.K.H). Hadda kahor waxaynu sharraxnay mucjisooyinka sayniska ah ee lagu xusay Quraanka iyo Sunnada Nabiga (N.N.K.H). Kumanaankun oo sano ayey culumada Astronomer (cir bixiyeenadu) ay ku hawlanaayeen inay ka jawaabaan su’aalaha asalka u ah Koonka iyo meesha uu kayimid? miyuu... Continue Reading →
Laba arrimood oo Quraanku ka warramay oo ka yaabisay Aduunka!
Bismillah: Waagii hore dadku waxay rumaysnaayeen in walaxda ugu yar walxaha inay Atom, hase ahaatee waxa cadaatay in fikradaasi qaldanayd. Maanta waxaynu ognahay in walaxdu ka koobantahay Electron, Proton iyo Neutron. Hadana markii cilmi baadhis lagu sameeyey Neutronka iyo Proton ka waxa la ogaaday in ayaguna ay ka samaysan yihiin qurbayaal la dhaho Quarks. Si... Continue Reading →
Ma Wadnaha ayaa fakara mise Maskaxda? Mucjisada islamka
Ma Wadnaha ayaa fakara mise Maskaxda? Waa su’aal qadiimiya oo doodo badan dhalisay, balse inatynaan ka jawaabin Suaashan aynu dul istaagno dhawr tusaale oo kaa yaabin doona! Sida aan ka soo xiganaya jariirada Afka dheer ee Dailymail, cadadkeedii la daabacay 09 April 2008 ayaa waxay ka dooday cinwaanka ahaa: Can we really transplant a human soul? Suurta gal... Continue Reading →
Cilmiga Nafsiga ee kusoo arooray suurada Maryam
Bismilah, walaalayaal Quraanka Kariimka ah lama koobi karo xikmada ku gudo jirta, hase yeeshee mid midka Ilaahay inoo bidhaamiyey ayaan wax ka qaadanaynaa. Walaalayaal, bal aynu wax ka barano xikmadan rabaniga ah ee kusoo arortay Surada sagaal iyo tobnaad ee suratu Maryam. Walaalayaal, suuradan waxyaalaha ay ka warranto waxa kamid ah qisadii dhalashadii nabigii Ilaahay... Continue Reading →
Inta uu la eg yahay ballaca albaabka Jannada iyo Mucjisada Rasuulka SCW
Nebi Muxammad (صل الله عليه وسلم), wuxuu ahaa nebigii ugu dambeeyay nebiyada Alle. Mucjisada la siiyeyna nebi isaga ka horreeyay lama siinin. Nebi Muxammad (صل الله عليه وسلم) waa nebiga loo yaqaan sayidul Ambiyaa, warrusul. Waa sidoo kale nebiga loo yaqaan khaatimul ambiyaa warrusul. Waa nebiga ummada oo dhan ay rajeyn doonaan maalinta Qiyaama, waa... Continue Reading →
CADCEEDDU WAXA AY KU SUJUUDDAA CARSHIGA HOOSTIISA (Mucjisada Alle)
Waxaan maalma aan fogeyn aan aqriyey maqaal uu qorey nin Carbeed oo Mulxid ah, oo diiddan xaqiiqada xaddiiska nebiga (NNKH) uu tilmaamaya ee ah in cadceeddu ay ku sujuudda Carshiga hoostiisa. Maqaalkaasi wuxuu ninkaa kusoo qaatay inuu ka manaaqashooda xaddiiska nebiga (NNKH), ee ahaa markuu ku yiri Abuu Dar ”Ma garanaysaa Abuu Darroow!! halka ay... Continue Reading →